Saraakiisha ANC oo Zuma ka dalbaday in uu iscasilo – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Xisbiga haya talada dalka Koonfur Afrika ee ANC ayaa si rasmi ah uga dalbaday madaxweyne Jacob Zuma inuu is casilo. Wararka ayaa sheegaya in arrintan ay ka dambeysay markii uu madaxweynuhu mar sii horreysay diiday inuu is casilo.
Go’aankan ah in xilka laga qaada madaxweynaha ayaa ka dambeeyay kulan ilaa saaka aroortii socday oo ay lahaayeen masuuliyiinta xisbiga.
Haddii Zuma oo 75 sano jir ah uu diido baaqa xisbigiisa, waxaa laga yaabaa in loo qaada codka kalsoonida waxayna u badan tahay inuu wayn doono.
Warar aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in Mr Zuma uu oggoladay in uu iscasilo, balse uu dalbaday in muddo saddex bilood ah uu xafiiska sii joogo.
Wuxuu xilkan hayay tan iyo sanaddii 2009, waxaana tan iyo marakaasi hareeyay madaxweynaha eedeymo musuqmaasuq ah.
Xisbiga ANC si rasmi ah uma xaqiijinin qorshahan xil ka qaadista Zuma, balse masuuliyiin ka tirsan ayaa sidaa u sheegay warbaahinta Koonfur Afrika iyo wakaaladda wararka ee Reuters.
← Sonko asks court to dismiss appeal on election petition
Halkee ayay marayaan wadahadalada ONLF iyo Itoobiya? →